Booliska Nigeria oo dilay 14 Nin oo hubeysnaa | Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dunida Booliska Nigeria oo dilay 14 Nin oo hubeysnaa
Booliska Nigeria oo dilay 14 Nin oo hubeysnaa
Booliska Nigeria ayaa dilay 14 dabley ah kadib markii ay weerar hubeysan kusoo qaadeen saldhig boolis oo kuyaala bartamaha gobolka Benue ee dalka Nigeria, sida ay baahisay Warbaahinta dalkaas.
Afhayeen u hadlay booliska Benue, Catherine Anene, ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in koox dabley ah oo tiradooda lagu qiyaasay 50 ay weerar ku soo qaadeen saldhig boolis oo ku yaal magaalada Katsina-Ala ee gobolka, si ay u sii daayaan qaar ka mid ah Kooxo burcad ah.
“Hawl-wadeennada qaybta bilayska, oo markii horeba heegan ahaa, ayaa dagaalyahannada la galay dagaal culus,” ayay tiri Anene, iyada oo intaa ku dartay in 14 ka mid ah dableydii la halka kuwa kalena ay la baxsadeen, iyaga oo dhaawac ah.
Waxay sheegtay in Saraakiisha booliska ay ku raad joogaan dableydii baxsatay, waxayna ku boorisay dadka deegaanka inay booliska ka caawiyaan macluumaadka kooxahaas.
Dalka Nigeria ayaa waxaa ka dhacay weeraro xiriir ah oo ay soo qaadeen kooxo hubeysan bilihii la soo dhaafay. Waxa kale oo ka dhacay dhacdooyin soo noqnoqday oo ah dhaca xoolaha iyo burcadnimada hubeysan.
Previous articleMadaxweyne ku xigeenka Puntland oo kulan la qaatay safiirka Itoobiya + Sawirro
Next articleWaxtarka cajiibka ah ee ay leeyihiin miraha babaayga